Sidee Ayaad Ku Ogaan Kartaa In Ninkaada Uu Been Kuu Sheegayo - iftineducation.com
Sidee Ayaad Ku Ogaan Kartaa In Ninkaada Uu Been Kuu Sheegayo
aadan21 / April 22, 2012
iftineducation.com – Gabaryaheey haddii aad dooneyso in si fudud aad ku ogaato xiliga ninkaada uu ku sheekeynayo in warkiisa sax yahay ama been yahay waxaad raacdaa habkaan hadaad ku aragto ogaaw been ayuu ku sheegayaa.
Indhaha Been Ma Sheegaan: marka uu wax ku leeyahay si wacan oo toos ah u fiiri indhihiisa haddii uu been sheegayo waxad arkeysa isaga oo si deg deg ah kaaga jee-jeedinaya indhihiisa.
Fiiri Dhaq-dhaqaaqa Cagahiisa: Haddii uu ku sheekeynayo cagahiisana ay sameynayaan dhaq-dhaqaaq ah in marba cag cagta kale saaro ama kala war wareejiyo ogaaw been ayuu shegaya ama wax aan soconeyn ayuu kaa dhaadhicinayaa.
Hadii Uu Dhabarka Kuu Jediyo: haddii aa aragto marka uu hadalka kuu bilaabo in durba garabkiisa ku soo aadinayo ogaaw wax ayuu kaa qarinayaa wajigiisa maadama beenta laga garto wajiga.
Su`aal Kedis ah weydii: weydii su`aal kedis ah oo sahal oo uusan fileyn tusaale , xalay intee jirtay ama yaad la qaxweeysay , waxaad fiirisaa jawaabta uu ku siinayo hadii aad aragto in gacmihisa uu jeebka giliyay ogaaw waxa uu isku dayayaa in uu wax ka qariyo maxaa yeelay been ayuu sheegaya.
Hadii aad qabto talo iyo tusaale fadlan inoogu soo hagaaji ciwaankeena.
Ragga Somalida %40 Haweenka Iyaga Ayaa Kaga Sareeya Dhanka Jaceylka Romantica Halka Haweenka
Haweenka Kama Helaan Ninka Caqliga Badan Iyo Kan…